NextMapping | Mustaqbalka Shaqada Blog
Ka raadi Taariikhda Dooro Taariikh June 7, 2021 Waxaa laga yaabaa 12, 2021 April 13, 2021 March 24, 2021 February 17, 2021 December 14, 2020 November 18, 2020 October 22, 2020 October 8, 2020 August 27, 2020 August 18, 2020 July 7, 2020 Waxaa laga yaabaa 22, 2020 April 21, 2020 April 13, 2020 March 31, 2020 March 25, 2020 March 16, 2020 March 13, 2020 February 11, 2020 February 4, 2020 January 2, 2020 December 19, 2019 November 25, 2019 November 19, 2019 November 14, 2019 November 4, 2019 October 24, 2019 October 6, 2019 September 18, 2019 September 5, 2019 August 29, 2019 August 17, 2019 July 23, 2019 July 4, 2019 July 2, 2019 June 21, 2019 June 14, 2019 Waxaa laga yaabaa 27, 2019 Waxaa laga yaabaa 6, 2019 April 23, 2019 April 11, 2019 March 25, 2019 March 12, 2019 March 11, 2019 February 28, 2019 February 14, 2019 February 5, 2019 January 29, 2019 January 15, 2019 January 3, 2019 December 5, 2018 December 3, 2018 November 20, 2018 November 6, 2018 October 30, 2018 October 14, 2018 September 29, 2018 September 19, 2018 September 12, 2018 September 5, 2018 August 27, 2018 August 17, 2018 August 1, 2018 July 26, 2018 July 23, 2018 July 11, 2018 July 9, 2018 June 28, 2018 Waxaa laga yaabaa 21, 2018 April 26, 2018 April 11, 2018 March 20, 2018 February 28, 2018 February 20, 2018 January 31, 2018 January 9, 2018 January 3, 2018 December 11, 2017 December 4, 2017 November 11, 2017 October 23, 2017 October 16, 2017 September 12, 2017 September 7, 2017 August 25, 2017 July 26, 2017 July 19, 2017 June 15, 2017 June 7, 2017 Waxaa laga yaabaa 23, 2017 Waxaa laga yaabaa 4, 2017 Waxaa laga yaabaa 2, 2017 April 18, 2017 April 5, 2017 March 21, 2017 March 10, 2017 March 1, 2017 February 20, 2017 February 7, 2017 January 17, 2017 January 6, 2017 December 14, 2016 December 9, 2016 November 21, 2016 November 16, 2016 October 28, 2016 October 12, 2016 October 3, 2016 September 23, 2016 September 14, 2016 August 22, 2016 August 12, 2016 July 19, 2016 June 28, 2016 June 22, 2016 June 13, 2016 Waxaa laga yaabaa 17, 2016 Waxaa laga yaabaa 12, 2016 Waxaa laga yaabaa 2, 2016 April 25, 2016 April 7, 2016 March 29, 2016 March 14, 2016 March 12, 2016 February 10, 2016 January 19, 2016 January 17, 2016 December 29, 2015 December 13, 2015 December 8, 2015 November 27, 2015 November 23, 2015 November 19, 2015 November 9, 2015 October 14, 2015 September 16, 2015 August 28, 2015 August 14, 2015 August 6, 2015 July 27, 2015 July 15, 2015 June 10, 2015 Waxaa laga yaabaa 11, 2015 April 1, 2015 March 23, 2015 March 11, 2015 February 8, 2015 February 3, 2015 January 18, 2015 December 23, 2014 December 8, 2014 October 29, 2014 October 24, 2014 October 8, 2014 October 3, 2014 September 9, 2014 September 4, 2014 August 29, 2014 August 28, 2014 August 27, 2014 June 25, 2014 June 12, 2014 Waxaa laga yaabaa 25, 2014 Waxaa laga yaabaa 16, 2014 Waxaa laga yaabaa 15, 2014 Waxaa laga yaabaa 13, 2014 Waxaa laga yaabaa 8, 2014 April 24, 2014 April 17, 2014 April 14, 2014 April 11, 2014 March 28, 2014 March 19, 2014 February 27, 2014 February 20, 2014 February 4, 2014 February 3, 2014 January 16, 2014 December 6, 2013 November 14, 2013 November 8, 2013 September 19, 2013 September 16, 2013 September 5, 2013 August 22, 2013 August 18, 2013 July 20, 2013 Waxaa laga yaabaa 20, 2013 April 20, 2013 March 20, 2013 February 20, 2013 January 20, 2013 December 23, 2012 December 20, 2012 November 23, 2012 November 20, 2012 October 20, 2012 September 20, 2012 August 20, 2012 July 23, 2012 July 20, 2012 June 20, 2012 Waxaa laga yaabaa 20, 2012 April 20, 2012 March 20, 2012 March 3, 2012 February 23, 2012 February 20, 2012 January 28, 2012 January 23, 2012 January 21, 2012 January 20, 2012 January 19, 2012 December 22, 2011 December 20, 2011 November 20, 2011 October 20, 2011 September 20, 2011 August 20, 2011 July 20, 2011 June 20, 2011 Waxaa laga yaabaa 20, 2011 March 20, 2011
Ka raadi Category Select Category1 Goobta Shaqada ee XulashadaDhalinta 3QodobkaBlogs ugu fiicanblogBusinessMadaxa Xalkahoggaanka wax ka beddelomaaraynta isbedelkaBeddelka Maareynta jiilalkaGanacsiga XasiloonHogaaminta HorukacaMustaqbalka ShaqadaGen Y's adduunka oo dhanJiil XGeneration YJinsiyadaha iyo TeknolojiyadaAbuurista goobta shaqadaHal-abuurnimo iyo Hal-abuurnimo ee ShaqadaHal-abuurnimo ee goobta shaqadaIsku-dhafka Teknolojiyada Isgaarsiinta Si Loo Sii Daayo Suuragalnimada AadanahaLataliyaha hogaamintaIstaraatijiyadaha HogaamintaTilmaamaha HoggaankaHoggaaminta Beddelka Goobta ShaqadaHoggaaminta Goob Shaqeed oo Kala DuwanHogaaminta Jiilkawarbaahintaisbedelka abaabulMuuqaallada HabkaGoobta Shaqada 2020DaalacanayoUncategorizedHagaajinta Hoggaankaaga OS
Kooxo Isku-dhafan oo Hogaaminaya
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waa weyn ee soo maray hogaamiyayaashu tan iyo markii ay aafeeyeen aafada ayaa ah 'hogaaminta kooxaha isku dhafan'. Ahaanshaha hogaamiye ka hor safka faafin wali wuxuu ahaa mid aad u caado ah in hogaamiyayaashu ay leeyihiin shaqaale inta badan ka shaqeeya xafiiska. Markuu safmarku faafay waxay xoojisay mustaqbalka xaqiiqda shaqada ee 'shaqada fog'. Cudurka faafa kahor shirkado badan ayaa yiri […]
Hogaamiyayaashu Waxay U Baahan Yihiin Xirfadaha Aadamiga Aasaasiga Ah Si Kooxuhu Ugu Habsamaan
Waxaan sahamin ku sameynay in ka badan 1000 shaqaale ah waxaanna weydiinay "Xirfado noocee ah ayaad u maleyneysaa in hogaamiyayaashu u baahan yihiin inay kugu mashquuliyaan?" In ka badan 94% dadka la wareystay waxay sheegeen inay u maleynayaan in hoggaamiyeyaashu ay u baahan yihiin xirfadaha aadanaha ee aasaasiga ah (sidoo kale loo yaqaan xirfadaha jilicsan) si ay kooxaha uga mashquulaan. Waagii hore, ereygii hore u ahaa […]
5 Cashar Cashar Hogaamineed Oo Laga Bartay Faafida
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafey waxaan sameynay sahanno hogaamiyayaal ka kala socda warshado badan sida casharadooda hogaamineed ee ay ka barteen aafada. Waxa aan dib uga maqalnay madaxdu waxay ahayd in wax badan laga bartay sannadihii 2020 iyo ilaa 2021. Hoggaamiyeyaasha qaar ma aysan rabin xitaa inay ka fekeraan casharradii laga bartay sababta oo ah […]
Waxaan sameynay sahanno badan oo shaqaalaha fogfog ah waxaanan soo ururinay sida ugu fiican ee shaqaalaha meelaha fogfog looga shaqeeyo. Siyaabo badan ayaa waxaa jiray is afgarad guud oo ahaa in marka 2020 ay dhammaato ay jiri doonto dareen ah in dib loogu noqdo 'caadi'. Wax kastoo caadi ah heerarka maanta jira waxaa iska cad inuu jiro wax cusub oo caadi ah […]
21 Isbeddellada Khariidadda Goobta Shaqada ee 2021
Sannadkan waxaan la wadaageynaa Isbeddelladayada '21 NextMapping Goobaha Shaqada' ee 2021 iyada oo loo marayo slideshare. Covid19 iyo 2020 ayaa waligood saameyn ku yeeshay habka aan u shaqeyno iyo sida aan u rabno inaan ku noolaano. Waxaan kaliya ku jirnaa bilowga isbeddelka bulshada ee aan u arki doonno natiijada cudurka adduunka.
Waa tan waxa Loogu Talagalay Hore 2021
Waa tan waxa laga sugayo sannadka 2021. Sannadkii 2020 adduunku si weyn ayuu isu beddelay - habka aan u shaqeyno - habka aan u nool nahay iyo sida aan mustaqbalka u eegno. Sanadka 2020 dhammaanteen waan isku raaci karnaa inaan dhammaanteen la kulanno xoogaa walaac ah. Aadam ahaanshuhu waa inaad la kulanto walaac. Ka […]
Shaqadayada Musiibada Ahi Waa Cadaadiska Dhiigga Dadka Hoose
2020 miyey kugu laaday adiga maxaa ogtahay? Tani waa tan aan qaatay sida aniga / annagu aan diiradda u saari karno dadnimadeenna guud inta lagu jiro aafada. Kuma garanayo adiga laakiin 2020 ayaa laad weyn ku noqday kursiga surwaalka. Waxay umuuqataa in walaaca cudurka faafa uu xirtay qaar badan oo […]
Goobta Shaqada Mustaqbalku waa iskudhaf Remote iyo Shaqaalaha Xafiiska
Waxaan maqalnay hadallo badan oo kusaabsan 'caadiga cusub' tan iyo bilowgii cudurka faafa. Xaqiiq ahaan qofna runtii ma oga sida caadigaas cusubi u ekaan doono. Waqtigan xaadirka ah waxaan maraynaa kacaan bulsheed. Cudurka faafa wuxuu ku kalifaa shaqaalaha inay dib u qiimeeyaan waxa shaqadooda loola jeedo shaqsi ahaan. Loo shaqeeyayaashu waxay la qabsadeen […]
Daraasadda Xaaladda Caymiska: 5 Siyaabood oo Looga Shaqeeyo Meel Fog
Daraasadda Xaaladda Caymiska: 5 Ways oo looga Shaqeeyo Meel fog Martida ay soo dirtay Crystal Metz - Crystal sidoo kale waa Shahaadada loo yaqaan 'NextMapping Entrepreneur Coach' oo la shaqeysa ganacsatada si ay si habsami leh u muujiyaan waxa xiga ee guusha weyn Ka shaqeynta meel fog, ama socodsiinta meheraddaada, maaraynta shaqaalaha iyo ka farxinta macaamiisha guriga, waxay noqon kartaa wax yar in la yiraahdo […]
5 Hagayaasha Hogaaminta ee Loogu Talagalay Caqabadaha Ugu Caansan ee WFH (Shaqada Guriga) Caqabadaha
Qoraalkan qoraalka ah waxaan kula wadaagayaa 5 hacks hoggaamineed caqabadaha ugu badan ee WFH (shaqada guriga). Baaqii dhawaanta ee Zoom ee lala yeeshay agaasime guud waxaan ka wada hadalnay waxyaabaha iyada iyo hoggaamiyeyaasheeda ka dhigaya inay soo jeedaan habeenkii inta lagu jiro aafada. Caqabadaha iyada iyo hoggaamiyeyaasheedu la tacaalaayeen waxay ahaayeen kuwo aad isugu eg […]
Waxaa jira 8 siyaabood oo hoggaamiyeyaashu u taageeri karaan shaqaalahooda si ay ugu guuleystaan ​​xilliyada hubin-darrada daran. Dhawaan macmiil ayaa la wadaagay inay ku dhibtoonayso inay xubnaheeda ku mashquuliso. Waxay sidoo kale la wadaagtay in shaqaalaheeda lagu xujeeyay inay ahaadaan kuwo diirada saaraya sidoo kale wax soo saar leh. Ma jiro buug-gacmeed lagu guuleysto wax ka qabashada dhammaan […]
Mustaqbalka Shaqada iyo Awooda Summada
Dhawaan waxaan marti ku ahaa wakaaladaha Zync ee taxane ah oo kahadlaya mustaqbalka shaqada iyo awooda sumadda.
Sidee ay Hogaamiyayaashu ugulaabanayaan inay Hogaamiyaan Khilaafka'vidvid-19 '
Shalay waxaa la iweydiiyay sida ay hogaamiyayaashu ugu kaceen inay hogaamiyaan burburka Covid-19.
Intii lagu jiray Coronavirus-ka - Sideed Dareensantahay Mustaqbalka?
Waxaan u dirnay dadweynaha su'aal sahamin ah oo aan weydiineyno - "inta lagu jiro coronavirus-ka sidee ayaad u dareemaysaa mustaqbalka? Xogta wali wey soo socotaa oo markaad dhammeystirto sahanka waxaad arki doontaa natiijooyinka. Hoos waxaan ku wadaagaynaa jawaabaha hordhaca ah. Su'aalaha aan weydiinnay waxaa ka mid ahaa: Ma waxaad dareemaysaa rajo wanaagsan [the]
Coronavirus Ayaa Ka Hadlaya Mustaqbalka Shaqada
Dhamaan mustaqbal yahanadu waxay kahadlaan carqaladeynta iyo u diyaar ahaanshaha carqaladeynta - hal carqalad oo aan ognahay hubaal waa in Coronavirus uu dadajinayo mustaqbalka shaqada. Maaddaama dadku la qabsadaan shaqada fog, caqabado cusub ayaa soo ifbaxay iyo fursado dhaqaale oo cusub ayaa soo ifbaxaya Fatahaadda macluumaadka ku saabsan cudurka loo yaqaan 'coronavirus' waa mid aad iyo aad u badan maalin walbana […]
Koorso Cusub oo Online ah - Sida Loo Abuuro & Wax Loogu Abuuro Xawaaraha Isbedelka
Runtii waan ku faraxsanahay inaan ku darno koorso cusub oo khadka tooska ah ah - "Sida Loo Abuuro & Wax Loogu Abuuro Xawaaraha Isbedelka". Bishii Febraayo waxaan ku darnay, "Mustaqbalka qorista iyo xafidida Hibada Sare" koorsada internetka. Koorsadeena cusub, "Sida Loo Abuuro loona Abuuro Xawaaraha Isbedelka" waxaa loogu talagalay in lagu caawiyo hoggaamiyeyaasha, xubnaha kooxda, […]
Kordhinta Shaqada Fogaanta ee 2020 - Sida Loogu guuleysto Shirkaddaada
Markii aan qoraalkan qorayay waxaan ku dhex jirnaa cudur faafa coronavirus. Waxaan sare ugu kaceynaa shaqada fog fog sanadka 2020. Iskuulada waa la xiray, makhaayadaha waa la xirayaa ama adeegyo ayaa badalay si loo qaado oo kaliya, tafaariiqleyda sida Apple waxay leeyihiin dukaamo xiran waxayna warshad walba saameyn ku yeelatay carqaladeyntaan weyn. 5 sano […]
Isticmaal Moodeelka 'PREDICT' Si Looga Faa'iideysto Welwelka Ku Saabsan Mustaqbalka
Waxaan ku jirnaa culeyska faafa ee Covid-19 qof walbana wuu walwalsan yahay, qof kastaa wuxuu dareemayaa indho la'aan saameynta dhaqaalaha adduunka. Waxaan u adeegsan karnaa aalado ay ka mid yihiin nooca PREDICT si loo yareeyo welwelka mustaqbalka. Warshad kasta waxaa saameyn ku leh warshadaha safarka, warshadaha shirarka, iyo saadka […]
Jason Campbell oo ka tirsan MindValley ayaa ku wareystay Cheryl Cran 'is-hogaaminta' loo baahan yahay si loo abuuro mustaqbal la wadaago. Si aad u dhageysato codka oo dhameystiran oo wareysigan ah halkan tag. Jason: Waxaan halkaan ku hayaa Cheryl Cran, taas oo ah, Oh hoog, waxaan heysanaa daaweyn noocan oo kale ah oo aan uga hadlayno mustaqbalka shaqada iyo in mustaqbalku uu yahay […]
Mustaqbalka Khibrada Macaamiisha
Waa maxay mustaqbalka khibrada macaamiisha? Dhowr sano ka hor waxaan la shaqeeyey shirkad tiknoolajiyad ah oo saareysa shirarka qadarinta macaamiisha. Muhiimadda shirarku waxay ahayd in macaamiisha shirkadaha teknolojiyadda la siiyo qalab iyo agab cusub oo ay uga faa’iideystaan ​​tiknoolajiyadooda. Waxaa la i weydiiyay inaan xuso munaasabadahaan [on]
Sanadka 2020aad Isbedelidda Nafsaddayada
Waa bilowgii tobaneeyo sano cusub IYO 2020 waa sanadkii aan nafteenna ku horumarin lahayn. Waxaa la joogaa waqtigii qof kasta oo naga mid ah uu kordhin lahaa ballanqaadkiisa inuu noqdo shaqsiyaad wanaagsan, ciyaartoy wanaagsan, iyo hoggaamiyeyaal wanaagsan. Ma dareemi kartaa deg-deggeeda? Miyaad dareemi kartaa jiidashada mustaqbalka ee aad na weydiineyso […]
Dabaaldega 2019 ee NextMapping
Waxaan halkaan ugu dabbaaldegeynaa 'NextMapping' maadaama 2019 soo dhow yahay. Sannadka 2019 buuggayga, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Abuur Mustaqbalka Shaqada" IYO wuxuu abuuray daabacaadda 2aad oo leh buug shaqsiyeed shaqsi ah oo la daabici doono Febraayo 2020. Macaamiisheena la-talinta waxay kordhiyeen guushooda sannadka 2019 iyagoo isku duubay hoggaanka la wadaago. Gudaha […]
Dijital, Isbeddel iyo nooca PREDICT Model Chris Rainey wuxuu wareysanayaa Cheryl Cran
Maanta waxaan ku faraxsanahay inaan wareysto Chris Rainey oo ah aasaasaha HRleaders.com mustaqbalka shaqada, dijitaalka, isbeddelka iyo qaabka PREDICT ee ka socda buuggayga, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Abuuritaanka Mustaqbalka Shaqada". Wareysiga ayaa waxaa diirada lagu saaray mustaqbalka isbeddelaya iyo sida hoggaamiyeyaashu ay uga faa'iideysan karaan qaabka PREDICT ee […]
Sida Loo Helo Shaqaalaha Inay Ku Hawl Galaan
NextMapping-ka waxaan ku soo sahaminay kumanaan hogaamiye oo mid ka mid ah arimaha ugu waa weyn ee horyaala hogaamiyeyaashu waa "sida shaqaalaha looga dhaadhiciyo". Dhawaan, waxaan u qabtay aqoon isweydaarsiyo taxane ah Bangiga BMO ee Montreal oo ku baahsan Kanada. Waxaan u safarnay Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Montreal, iyo Toronto. Diirada ayaa la saaray mustaqbalka shaqada […]
Mid ka mid ah Isbeddelada loogu talagalay Mustaqbalka Shaqada 2020
Dhawaan waxaan soo saarnay warbixinteenii cusbooneysiinta ee Top 20 Isbeddellada Mustaqbalka Shaqada 2020. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa mid ka mid ah isbeddellada mustaqbalka shaqada 2020. Mid ka mid ah isbeddellada aan baaritaanka ku sameynay waxaa ka mid ah diiradda saarista isbeddelka dhijitaalka ah iyadoo loo marayo muraayadaha 'dadka marka hore '. Hogaamiyaal badan oo aan daraasad ku sameynay ayaa sheegay […]
Waxaan sahaminay kumanaan hogaamiye ah mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee la shaaciyay ayaa ah: Sida loo joojiyo shakiga ka jira goobta shaqada. Sahanka Khariidadeynta Xawaaraha wareersan ee isbeddelka tikniyoolajiyadda iyo ganacsiga ayaa adkeynaya in shaqaalaha lagu mashquuliyo abuuritaanka mustaqbalka. Shaqaalaha waxaa caqabad ku ah isbedelka socda mana aaminaan hogaamiyayaashooda […]
Maya "Xirfadaha Jilicsan"
Ereyga "xirfadaha jilicsan" waxaa loola jeedaa daciifnimo ama aan muhiim ahayn oo sidaa darteed waxaan dhihi, 'Xirfado jilicsan oo dambe ma jiraan!'. Waxaan ku jiraa hawlgal! Waxaan howshan ku jiray in ka badan toban sano! Waxaan rajeynayaa inaad igu soo biiri doontid. Hadafku waa in ereyga "xirfadaha jilicsan" lagu beddelo erey cusub sida "lama huraanka ah […]
Saadaalinta Mustaqbalka By Leverageverage Patrums
Ma jiro kubad madoobeysa laakiin waxaa jira sir ay hal-abuurayaashu ogyihiin - waxaad saadaalin kartaa mustaqbalka adoo ka faa'iideysanaya qaababka. Waxay ahayd Abraham Lincoln oo yidhi, "habka ugu wanaagsan ee saadaalinta mustaqbalka waa in la abuuro". NextMapping waxaan kaa caawineynaa inaad saadaaliso mustaqbalka adoo adeegsanaya qaabab. Buuggayga, “NextMapping - Anticipate, […]
Isbeddelkan Weyn wuxuu abuuri doonaa mustaqbalka shaqada
Waxaan tan kuqorayaa garoonka diyaaradaha ee Minneapolis halkaas oo aan kudhameystiray taxane muhiim ah oo kusaabsan macaamiisha warshada dib udejinta shaqaalaha, macaamiisha warshadaha difaaca iyo macaamiisha dowlada dhexe. In kasta oo mid kasta oo ka mid ah warshadahaas ay u muuqan karaan kuwo aan kala sooc lahayn oo aan la soo koobi karin haddana runta ayaa ah in warshad kasta oo gaar ah ay leedahay waxyaabo ay ka mid yihiin […]
Su’aal kama taagna in xoog-shaqeedka mustaqbalka uu noqon doono shaqaale la-qabsi ah. Shaqaalaha mustaqbalku waxay u muuqdaan kuwo gebi ahaanba ka duwan sida ay maanta yihiin. Dhowr isbeddel ayaa tilmaamaya isbeddelada saameynaya mustaqbalka goobaha shaqada. Buuggayga, "NextMapping - Ka filo, Navage and Abuur Mustaqbalka […]
Mustaqbalka wuxuu ubaahanyahay hogaamiyaasha leh astaamaha lab & dhedig
Mustaqbalka wuxuu ubaahanyahay hogaamiyaal leh astaamo lab & dhedig. Waxaan joognaa waqti iyo meel aad u muhiim ah oo adduunka ah. Maalin kasta waxaan aragnaa tusaalooyin hoggaan weyn oo aan sidaa u weyneyn oo rag iyo dumarba leh, ha ahaadeen shirkadaha, kuwa bilowga ah ama kuwa siyaasadda. Sifooyinka hoggaaminta waagii hore waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee labka ah […]
Dadkiinu Ma Aaminaa Hogaamiyadooda?
Waxaan qabaa su’aal: Dadkaagu ma ku kalsoon yihiin madaxdooda? Haddii aad ku jawaabtay haa - taasi waa wax fiican shirkaddaadu inay mustaqbalka diyaar tahay! Waxaa jira cilmi baaris lagu taageerayo sayniska oo cadeyneysa in dhaqanka aaminka uu leeyahay heerar kaqeybgal badan iyo waxtar kale. Paul J. Zak oo ah cilmi baare Harvard ah ayaa baaray xiriirka ka dhexeeya kalsoonida, hogaaminta iyo [leadership]
Caymiska Goobta Shaqada ee mustaqbalka 2025
Warshado badan oo ay kujiraan caymiska ayaa si deg deg ah ulaqabsanaya isbeddelada badan ee saameynaya caymiska goobta shaqada mustaqbalka 2025. AI, otomatigga, aaladaha casriga ah, badalida dabeecadaha shaqaalaha ayaa si dhaqso leh u saameynaya mustaqbalka caymiska. Waxaa loo baahan yahay in hogaamiyayaashu yeeshaan xirfado la casriyeeyay sida awood u lahaanshaha aragtiyo badan. Hogaamiyayaashu waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay hogaamiyaan […]
Sida Mustaqbalka Diyaar Loo Noqdo - Wareysiga Amber Mac
Cheryl Cran: Runtii waan ku faraxsanahay maanta, in Amber Mac uu marti noo noqdo. Amber fadlan la wadaag macaamiisheena asalkaaga. Amber Mac: Waad mahadsan tahay, waxaan ka shaqeynayay ku dhowaad 20 sano hadda warshadaha teknolojiyadda. Waxaan bilaabay inaan galo cawska laba farsamo oo laga bilaabay San Francisco. Waxaan leeyahay suxufinimo […]
Sida loo Flex Karo Waqtiga Flux
Miyaad ku qulqulaysaa isbeddel ballaaran? Naadiga ku soo biir! Waxaan ku jirnaa waqti ay lama huraan tahay in aan dhammaanteen ku fiicnaano barashada sida loo rogrogmi karo xilliyada qulqulka. Qeexitaanka 'dabacsanaan': Si loo guuro ama loo adkeeyo Qeexitaanka 'qulqulka': Isku mid ahaanshaha 'isbedel' Xawaaraha isbeddelka iyo macluumaadka aan wax ka qabanayno […]
1 2 ... 74 Xigta>